डलरको भाउ फेरी बढ्यो, कति छ अन्य देशको विनिमयदर? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
डलरको भाउ फेरी बढ्यो, कति छ अन्य देशको विनिमयदर? (सूचीसहित)
काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको विनिमयदरका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ । सोमबार डलर एकको खरिददर ११७ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ३१ पैसा थियो ।
युरो एकको खरिददर १३२ रुपैयाँ ३१ र बिक्रीदर १३२ रुपैयाँ ९८ पैसा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पाउण्ड एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १४६ रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको छ ।
मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर २७ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ । यता, कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ भने, युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ४४ पैसा रहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस कस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर? (सूचीसहित)
हेर्नुहोस् विनिमयदर सूचीसहितः
ट्याग्स: नेपाल राष्ट्र बैंक, विनिमयदर